ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏သူငယ်ချင်းများခုနှစ်တွင်ထူးဆန်းနယူးအစိတ်အပိုင်းများ Make ရန်ကဘယ်လို | တစ်ဦးကရထား Save
စာအုပ်တစ်ဦးကရထားလက်မှတ် NOW က
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏သူငယ်ချင်းများခုနှစ်တွင်ထူးဆန်းနယူးအစိတ်အပိုင်းများ Make ရန်ကဘယ်လို
အားဖြင့် Liam Cartwright 30/11/2019
တစ်ယောက်တည်းကမ္ဘာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုခရီးသွားတစ်ဦးသိရှိနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အတွေ့အကြုံကိုနိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့်သင်တို့ရှိသမျှအချိန်ကိုလုပျတစျခုခုကိုဟုတ်မဟုတ်, သင့်ရဲ့မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုချဲ့ထွင်ဖို့တစ်သက်တာခရီးစဉ်အတွက်ဒါမှမဟုတ်တစ်ကြိမ်, ခရီးသွားသင်၏အသက်တာပြောင်းလဲနိုင်သည်.
လူအတော်များများဟာဒီရက်ဖို့ရှေးခယျြ တစ်ဦးတည်းခရီးသွား, လွတ်လပ်ခွင့်ထိုကဲ့သို့သောအတွေ့အကြုံကကမ်းလှမ်းမှုအားဖြင့် invigorated. Lifehacker ဒါကြောင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကမ္ဘာ့အကြည့်ဖို့ရာအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောလူကြိုက်များနည်းလမ်းဖြစ်လာသည်အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ရှင်းပြသည်.
သင်တစ်ဦးတည်းခရီးသွားပြုလျှင်, အဆိုပါစွန့်စားမှု၏အစိတ်အပိုင်းလူသစ်တွေ့ဆုံနေသည်, မကြာခဏသူတွေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလွန်ကွဲပြားခြားနားသော, ဒါပေမယ့်မျှော်လင့်ခြုံငုံခရီးသွားစွန့်စားမှုကြွယ်ဝစေပါလိမ့်မယ်အားလုံးအဘယ်သူကို၏.
ကလပ်အသင်းတစ်ခုသိသာရွေးချယ်မှုများမှာနေတုန်း, အုပ်ထိန်းသူ သူတို့နှစ်တစ်ထောင်နှင့်အတူမျက်နှာသာထဲကပြုတ်ကျနေတာအကြံပြု. တိုက်ရိုက်ဂီတ ပို. လူကြိုက်များလာ, သူတို့သည်နားကြားအစုံကြား၌အချိန်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ထင်နှင့်အသစ်အသိအကျွမ်းအောင်.
ဤမျှလောက်များစွာသောရှိပါတယ် အကြီးအတင်ပါးဆုံရိုးဘား ပဲရစ်၏အကြိုက်တဝိုက်ခရီးသွားလာရန်ရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ဥရောပတလွှား, လူဇင်ဘတ်, နဲ့လန်ဒန်, သင့်ရဲ့စွန့်စားမှုအတွက်လာမယ့်အသစ်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတွေ့ဆုံဘို့အားလုံးပြီးပြည့်စုံသော.
ဖဲချပ်ကစားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် လူသစ်ဖြည့်ဆည်းရန်အကြီးအလမ်း, သင်တို့ပတ်လည်သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ရှာနေစားပွဲတစ်ခုကနေအဖြစ်. သူတို့ကိုသင်လေ့လာ, သငျသညျသို့ယူသှားနိုငျသောသူတို့နှင့်တည်ဆောက်ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်နှင့်အတူဟာသ သင့်ရဲ့ခရီးသွားမှတ်တမ်း.
ဖဲချပ်ကစား၏အကျိုးကျေးဇူးများတစ်ခုမှာကသင်ယူဖို့လွယ်ကူကြောင်း, ပင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအဓိပ္ပာယ်သစ်ကိုလူတွေတွေ့ဆုံတစ်လမ်းအဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက်လျင်မြန်စွာတက်ကောက်လို့ရပါတယ်. Partypoker အပေါ်ကဒ်ကျောင်းများတက္ကဆက် Holdem အပေါ်သင်ခန်းစာများပေး ဂိမ်းနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမအတွေ့အကြုံကိုအနည်းငယ်သာနှင့်အတူသူတို့အဘို့.
ယခုသင်လိုအပ်သမျှတစ်ဦးလောင်းကစားရုံကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်ပါသည်, သောသူစိမ်းတွေနဲ့ဆက်ဆံဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ကမ္ဘာတစ်လွှားပဒေသာရှိပါတယ်, ကောင်းစွာအဖြစ်ခရီးသွားများအတွက်ပေမယ့်ဒေသခံတွေအဘို့မဟုတ်ရုံ.
'ဆိုတဲ့ပျော်စရာအပိုင်းရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်' '; သင်တစ်ဦးရှည်လျားသောခရီးတစ်ခုကိုဘယ်လိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြားရကြပြီ? တစ်ဦးတည်းခရီးသွားနေတုန်း, ဒါကြောင့်ပဲမှန်ကန်သောဖြစ်စေခြင်းငှါ,.
အချို့ရှိပါတယ် အံ့သြစရာမီးရထားခရီး ဥရောပတစ်လွှားယူနိုင်ပါသည်, ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့တိုက်ကြီးရှိပါတယ်အလှဆုံးနေရာများတွင်အချို့ကိုဖြတ်သန်း. သင်တစ်ဦးရထားပေါ်မှာနေတုန်း, သည်အခြားတူသောစိတ်ကလူလည်းရှိပါတယ်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်.
ဒါဟာအားလုံးထံမှတွေ့ကြံလူများတို့သည်ကြီးစွာသောလမ်းအသက်တာ၏သွားလာင့်, အလုပ်နှင့်ကနေခရီးသွားလာဒေသခံများ, သင်နှင့်အတူသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအချို့ကိုဝေမျှတက်အဆုံးသတ်တစ်စုံတစ်ဦးက၎င်းတို့၏စွန့်စားမှုပေါ်နှင့်ဖြစ်ကောင်းပင်သည်အခြားခရီးသွားများအတွက်.
အားကစားအများကြီးတစ်ဦးကဲ့သို့ဖြစ်၏ ခရီးသွားဧည့်ဆွဲဆောင်မှု ဒီရက်ကဒေသခံတွေခံစားရန်အဘို့အရာတစ်ခုခုဖြစ်သကဲ့သို့. ကအားကစားကွင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်အတွက်ယူဖို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုခရီးစဉ်ရဲ့ရှိမရှိ, ဒါကြောင့်တစ်ဦးဧရိယာ၏ယဉ်ကျေးမှုအတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ် imbuing များစွာသောလမ်းဖွင့်.
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အာရှတစ်ဦးပုရစ်ဂိမ်းထဲမှာယူ, သို့မဟုတ်ယူရိုဝန်းကျင်သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုလိုက်နာမှကြည့်ရှု 2020 အရာက Sky Sports နှင့်ကရှင်းပြသည်ဥရောပတစ်ဝှမ်းအမျိုးမျိုးသောမြို့ကြီးများရှိရာအရပျယူကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. ရှိပါတယ် ဖြစ်ရပ်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏ ကမ္ဘာတစ်လွှားသင်သည်သင်၏ခရီးအပေါ်အချို့သောလူသစ်ဖြည့်ဆည်းရန်အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်းကြောင်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်း.
သငျသညျဤလောကနှငျ့ထူးဆန်းတဲ့အသစ်အစိတျအပိုငျးအတွက်ခရီးသွားနှင့်ထုတ်လုပ်သူအမိတ်ဆွေများအသငျ့နေကြတယ်? ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားအကူအညီနဲ့သငျသညျ စာအုပ်တစ်ရထား လွယ်ကူပြီးစျေးနှုန်းသက်သာစွာ.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “10 အများစုကတင့်တယ်အလယ်ခေတ်မြို့မှာဥရောပ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/how-to-make-friends-in-strange-new-parts-of-the-world/ – (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, သင် / nl မှ / fr သို့မဟုတ် / က de နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#မိတ်ဆွေများက #worldtravel strangeplaces traveltips
Liam Cartwright နေရာသစ်သွားရောက်ခြင်းနှင့်အသစ်ကလူတွေ့ဆုံအားမိမိအသက်တာကိုဆက်ကပ်အပ်နှံထားပြီးသူတစ်ဦးအလွတ်တန်းစာရေးဆရာမများနှင့် globetrotter ဖြစ်ပါသည်. တစ်ဦးအဖြစ် (အများအားဖြင့်) တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားသူအသစ်တခုနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်မည်သူမဆိုမသိ၏အခက်အခဲများနားလည်နိုင်. သူကသူ့ဆောင်းပါးတွေဟာတစ်ကိုယ်တော်ရှာဖွေသူအဖြစ်ဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်ကောင်းသောအကြံပေးချက်များသည်နှင့်သူချင်းခရီးသွားများအတွက်တွေ့ဆုံရန်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်. သူကနိုင်ငံအသစ်များရှာဖွေစူးစမ်းမဟုတ်သောအခါသူသညျမိမိကိုနောက်ခရီးစဉ်အကြောင်းခရီးသွားစာအုပ်စဉ်းစားတွေးခေါ်နဲ့အတူအိမ်မှာတွေ့နိုင်ပါသည်. - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ
မီးရထားခရီးသွားလာ, မီးရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ဥရောပခရီးသွား